Hanana kandidA� tokana ny Armada amina��ny fifidianana 2018 – fanilo
Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera.
Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, nyA� alatsinainy 13 novambra teo. Mazava moa ny fomba fijerina��izy ireo ny raharaham-pirenena fa a�?mila jerena izay nodinihina��ireo komity. A�Mialoha ny hirosoanaA� eny amina��ny ireo solombavambahoakaa�?. Ny antoko Maitso indray, nitatitra ny talata 14 novambra teo, fa misy ny fanatsarana vitsivitsy azo ataoA� amina��ity lalA�m-pifidianana ity. Anisana��nyA�A� ilA�naA� fijerena manokana ny sazy tokony hapetraka, amina��ny fampiasana ny fitaovam-panjakanaA� mandritra ny fampielezan-kevitra , izay zary lasaA� ho tombontsoana��ilay mpilatsa-kofidina manokanaA� ary tokony A�hatao mazava tsara. Efa mipetraka ao anatina��ny ity lalA�m-pifidianana ity izany, saingy tsy hita ao ny sazy,A� hoy ihany ny antoko Maitso. Ny sazy tokony hapetrakaA� dia ny hahatongavana any amina��ny tsy fahafaha-mandray anjara tanteraka ho mpilatsa-kofidina, ho ana��izay mampiasa ny fitaovam-panjakana.
Fanamarihana faharoa, napetraky ny antoko Maitso, A�Andriamatoa Georget Alexandre, ny fampiakarana ny voka-pifidianana amina��ny lakana amina��ireo toerana lavitra sy saro-dalana, ary ny filolohavana ny vatam-pifidianana rehefa vita ny fanisam-bato ka entina mamakivaky lalana, izay tsy dia atokisana loatra. Soso-kevitra naroso, nyA� fampiasana ny teknolojia, izay efa mivoatra amina��izao taonjato iainana izao. Azo atao tsara ny mampiasa ny finday, izay azo akA�na sary ary afa-mampita avy hatrany ny vokatra eo no ho eo amina��ny tabilao aty amina��ny foibe,A� amina��ny alalana��ny aterineto. Matetika, any amina��ny vokatra no ahitana olana satria raha maharesy Rakoto dia tonga aty amina��ny foibe, lasa Rabe no manana vato ambony indray. Ialana amina��izany, A�ilaina ny fampiasana ny fitaovana efa maoderina .
Mahakasika ny andro fahavaratraA� hanaovana ny fifidianana, A�tsy dia olana loatra izany, hoy ihany ny antoko Maitso, fa ny ialana matetika amina��ny mety olana, ny fampiasana ny teknolojia maoderina. Nohararaotina��ny antoko Maitso ny filazana momba ny kandidA�, izay arosony amina��ny 2018. Nitatitra ny antoko A�mivondrona ao anatina��ny Armada faA�A� hanana ny kandidA� iray hitambarana, izay arosony izy ireo. A�Miankina ny fivoriana mbola hataona��ny antoko mivondrona ao anatina��ny Armada, dia ny MMM, Havana, Antoko Maitso, TGV. NY HIARAKA ISIKAA� ny hamaritana izay halatsaka amina��ny iray amina��ireo antoko ireo. Momba ny vola ampiasaina��ny kandidA� mandritra ny fampielezan-kevitra,A� nilaza ny antoko Maitso fa matoa hilatsaka ny olona iray dia efa vonona amina��ny hoenti-manana, fa raha ny hevitra��izy ireo, dia tokony havela samy hampiasa nyA� hananany ny kandidA� raha ekena��ny rehetra.
Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera. Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, […]